Nandeha an-tserasera soa aman-tsara ny sisin-dranomasina 100m voalohany an'i Zhongfu Lianzhong
avy amin'ny admin tamin'ny 21-09-03
Tamin'ny 1 septambra 2021, dia vita an-tserasera an-tsakany sy an-davany ny sisin-tsoratry ny turbine rivotra 100 metatra voalohany an'i Zhongfu Lianzhong tao amin'ny toby famokarana elatra Lianyungang. 102 metatra ny halavany ary mandray teknolojia fampidirana interface vaovao toy ny balizy lehibe amin'ny fibre carbon, prefabrication root root ary ...
Sinopec Shanghai avy any Sina dia hamita ny tetikasa fibre karbonina avo lenta amin'ny faran'ny 2022
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-08-30
BEIJING, 26 Aogositra (Reuters) - Sinopec Shanghai Petrochemical (600688.SS) dia manantena ny hamita ny tetikasan'ny fibre karbaona mitentina 3,5 miliara yuan ($ 540.11 tapitrisa) amin'ny faran'ny 2022 hamokatra vokatra avo lenta amin'ny vidiny ambany, tompon'andraikitra iray amin'ny orinasa hoy ny Alakamisy. Toy ny diesel con ...
Lohatenin'ny fampiasam-bola roa an'ny angovo hidrôzenina: sela sy fitaovana fototra
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-07-15
Ny sandan'ny kalon'ny hidrôzenina dia avo telo heny noho ny lasantsy ary 4,5 heny noho ny coke. Aorian'ny fanehoan-kevitra simika dia rano tsy misy loto maloto ihany no vokarina. Ny angovo hidrôzenina dia angovo faharoa, izay mila mihinana angovo voalohany hamokatra hidrôzenina. Ny fomba lehibe indrindra hahazoana hydrog ...
Toro firoboroboana telo amin'ny fampiharana fibre carbon thermoplastic
Miaraka amin'ny fanitarana tsy tapaka ny tsenan'ny fangatahana, ny fitambaran'ny fibre karbaona misy thermosetting dia mampiseho ny fetrany manokana, izay tsy afaka mahafeno tanteraka ny filan'ny fampiharana avo lenta amin'ny lafiny fanoherana ny fitafiana sy ny fanoherana ny hafanana avo. Amin'ity tranga ity, ny satan'ny t ...
Fampidirana ny dingan'ny famolavolana ny fitambaran'ny fibre karbaona thermoplastic
Ny teknolojia mamolavola ny fitambaran'ny thermoplastic avo lenta dia nafindra indrindra avy amin'ny fitambaran'ny resina thermosetting sy ny teknolojia famoronana vy. Araka ny fitaovana isan-karazany, azo zaraina amin'ny famolavolana, famolavolana horonantsary indroa, famolavolana autoclave, famolavolana kitapo banga, filament windi ...